उपभोक्ता सचेतनामा जुट्यो खाद्य प्रविधि कार्यालय – Sky News Nepal
उपभोक्ता सचेतनामा जुट्यो खाद्य प्रविधि कार्यालय
‘जिल्ला प्रशासनलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिनु पर्छ’
१६ कार्तिक २०७६, शनिबार १९:२२ मा प्रकाशित
स्काई न्यूज/कार्तिक १६, सुर्खेत ।
मानिसको सबैभन्दा ठूलो धन भनेको उसको स्वास्थ्य हो । पछिल्ला केही वर्षयता बजारमा बिक्री वितरणमा राखिएका अधिकांश खाद्य वस्तुमा मिसावट भएको भेटिन्छ । त्यस्ता वस्तुको सेवनबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारको असर पु¥याउँदा आममानिस दीर्घरोगी समेत बन्न पुगेका छन् । खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन र मिसावटयुक्त हुँदा उपभोक्ताको स्वच्छताको अधिकार दुषित पारिएको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेत उपभोक्ता सचेतना अभियानमा जुटेको छ ।
उपभोक्ता सचेतिकरण अभियान अन्तर्गत शुक्रबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३, नम्वर वडा क्षेत्रका उपभोक्ताहरु तथा सरोकारवाला वीचमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा निमित्त डिभिजन प्रमुख भेषबहादुर थापाले खाद्य सम्बन्धि बिभिन्न ऐन कानून, निर्देशिकाहरु, उपभोक्ता हक अधिकारहरु, वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनका क्रममा देखिएको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रमपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ नम्वर वडा स्तरीय बजार अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ । यसअघि कार्यालयले वीरेन्द्रनगर–६, नम्वर वडा स्तरीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिसकेको निमित्त डिभिजन प्रमुख थापाले जानकारी दिए । उनले जिल्लाका बिभिन्न स्थानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर तथा म्याद नाघेका खाद्य बस्तुहरुको बिक्री बितरण र सेवन गर्ने गरेको पाईएकाले उपभोक्ता सचेतिकरण अभियान थालिएको बताए । यस वर्ष उपभोक्ता सचेतिकरण अभियानका क्रममा बजार अनुगमन, उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरुसंग छलफल, बिभिन्न माध्यमबाट जानकारी प्रवाह गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘फास्ड फुडको प्रचलन बढ्दै जाँदा नेपालीको भान्सामा परम्परागत खाद्य परिकार विस्थापित भइरहेको छ । देखासिकीमा आएको यस्तो प्रचलनले हाम्रा भान्सा ‘रोगका घर’ बन्दैछन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले भने, ‘भान्सा मै औषधालय थियो कुनै समय । तर आज खासगरी शहरी जीवन परम्परागत सामाजिक जीवनशैलीबाट अलग हुँदै आधुनिकतातर्फ प्रवेश गर्दैछ । रोगको घर भनिने खाद्यवस्तुको गुणस्तर, उपयोगिता र शुद्धताका बारेमा सचेत नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता थपिँदैछ ।’ उनले सरकार सम्बद्ध निकायसँगै उपभोक्ता स्वास्थ्यसँग आवद्ध स्वयम्सेवी संस्थाहरुले यदाकदा बजारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेको भएपनि त्यस्तो अनुगमनले सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पद्धतिमा परिवर्तन नै आएको अनुभूति हुन नसकेको बताए ।
उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले खाद्यवस्तुको स्वच्छताका बारेमा सचेतना आवश्यक रहेको औल्याए । रोगका विभिन्न माध्यमहरु मध्ये खाना प्रमुख कारण रहेकाले यसको स्वच्छताले कतिपय रोगबाट बच्न सकिन्छ । उनीहरुले त्यसका लागि उपभोक्ता सजग हुनुका साथै खाद्यवस्तुको गुणस्तरका सम्बन्धमा सचेतता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘फास्ड फुडको प्रचलन बढ्दै जाँदा नेपालीको भान्सामा परम्परागत खाद्य परिकार विस्थापित भइरहेको छ । देखासिकीमा आएको यस्तो प्रचलनले हाम्रा भान्सा ‘रोगका घर’ बन्दैछन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले भने, ‘भान्सा मै औषधालय थियो कुनै समय । तर आज खासगरी शहरी जीवन परम्परागत सामाजिक जीवनशैलीबाट अलग हुँदै आधुनिकतातर्फ प्रवेश गर्दैछ । रोगको घर भनिने खाद्यवस्तुको गुणस्तर, उपयोगिता र शुद्धताका बारेमा सचेत नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता थपिँदैछ ।’ उनले सरकार सम्बद्ध निकायसँगै उपभोक्ता स्वास्थ्यसँग आवद्ध स्वयमसेवी संस्थाहरुले यदाकदा बजारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेको भएपनि त्यस्तो अनुगमनले सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पद्धतिमा परिवर्तन नै आएको अनुभूति हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार बजारमा उपलब्ध खाद्य वस्तुहरु चाहे त्यो खाद्यान्न होस् वा दाल, तेल अथवा मरमसला, दूध होस् वा दूग्धजन्य वस्तु अथवा पानी सबै मिसावटयुक्त छन् ।
‘फलफूल, सागसब्जीदेखि उपभोग गर्ने सबै वस्तुमा विषादिको अत्यधिक प्रयोगले मानवस्वास्थ्य कमजोर हुँदैछ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकायले नियमन र अनुगमनसँगै सचेतना विस्तारको कामलाई पनि अभियानकै रुपमा चलाउन जरुरी छ ।’ उनले व्यक्ति लाभका निम्ति शहर बजारका होटल, रेष्टुरेन्टहरुका भान्सामा के–कस्ता परिकार पाक्दैछन् ? कस्ता वस्तुको प्रयोग गरिँदैछ ? तेल, मसला वा खाद्यवस्तुकै गुणस्तर कस्तो छ ? नित्य अनुगमन नगरिने हो भने मानव शरीर रोगको घर बन्ने निश्चित भएको जनाए । उनका अनुसार यसतर्फ उत्पादक, उपभोक्ता, विक्रेतासँगै सरोकार राख्ने सबै निकाय, खासगरी स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर हुनुपर्दछ ।
अब जिल्ला प्रशासनलाई बजार अनुगमनको अधिकार पूर्णरुपमा दिनु पर्छ । अन्य कुनै निकायलाई यसको अनुगमन दिनु त्यति सार्थक देखिदैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७५ अख्तियारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभएकाले कानूनी समस्या देखिन्छ । राज्यले सही रुपमा कार्यान्वन गर्न नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार गुम्न पुगेको छ ।’ उनले सुर्खेतमा सबै भन्दा बढी औषधिमा उपभोक्ता ठगिएकाले यसबारे अभियान आवश्यक रहेको बताए ।
‘राज्यले उपभोक्तावादलाई दोस्रो दर्जामा राखेर नजरअन्दाज गर्दा गुणस्तरीय र अशुद्ध वस्तु खाएर जनताको ज्यू–ज्यान अस्वस्थ बनेको छ । अब जिल्ला प्रशासनलाई बजार अनुगमनको अधिकार पूर्णरुपमा दिनु पर्छ । अन्य कुनै निकायलाई यसको अनुगमन दिनु त्यति सार्थक देखिदैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७५ अख्तियारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभएकाले कानूनी समस्या देखिन्छ । राज्यले सही रुपमा कार्यान्वन गर्न नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार गुम्न पुगेको छ ।’ उनले सुर्खेतमा सबै भन्दा बढी औषधिमा उपभोक्ता ठगिएकाले यसबारे अभियान आवश्यक रहेको बताए । उनी पछिल्लो समय हरियो तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादीलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कडा कानून बनाउनुपर्ने बताउँछन् । खाद्यवस्तुमा मिसावटजस्तै विषादीले मानिसलाई गम्भीर समस्या निम्ताउँदै छ । यसको रोकथाम नभए मानिस सानै उमेरमा दीर्घरोगको शिकार बन्ने छन्,’ उनले भने ।